Humnooti Jubalaandi fi Raayya Ittisa Biyyaa Somaaliyaa Walitti Bu’an
Kaleessa daangaa keeniyaa fi Somaaliyaa rratti humnootni Jubaalaand fi Raayya Ittisa Somaaliyaa walitti bu’uun himame.
Walitti dhukaasa kaleessa magaala Somaaliyaa Bulahaawaa jedhamtu ka cina Daangaa keeniyaatti argamtu keessatti humnoota Jubalaandi fi Raayya ittisa biyyaa mootummaa jiddu galeessaa Somaaliyaa gidduutti uumamuu angawootni mootummaa Keeniyaa dubbatan.
Miseesni mana maree Kutaa Bulchiinsa Mandeeraa Mahaammed Maallim lolli kun ka dhalate yoo miseensonni rayyaa Somaaliyaa Abdirrashiid Hasan Abdinuur Iliyaas ykn Abdirrashiid janaan; ministeera Somaaliyaa duraanii yakka ajjeechaan himatamanii to’annaa jela turanii mana hidhaa keessaa miliqanii naannocha keessa turan jedhaman to’annaa jela oolchuuf socho’u loltoota isaan deeggaran humnoota Jubaalaandi walitti dhukaasani jedhan.
Mootummaan loltoota hidhannoo qaban gara dhibba tokkoo ta’an addabaasee bakka malu qubsiisee jira. Amma yeroo kana walakkeessa magaala mandeeraa keessa namni baqatee jira; namni hedduun qe’ee isaa gadi dhiisee jira.
Mr. Maallim miidhaa lola kanaan dhaqqabe beekamuu baatus garuu nageenyi naannoo waa nboora’eef, ammaa manneetiin daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa cufaa ta’uu himan.
Lola kaleessaan ka mootummaa Somaaliyaan barbaadamaa turan Abdirrashiid Janaan bakka san ha jiraatanii yks ha dhiisanii haga yoonaa wanni beekamu hin jiru. Mr. rashiid Ministeerri nageenyaa duraanii yakka ajjeechaa fi sarbiinsa mirga namoomaa yoo bara hojiirra turan dalaganiif mootummaa Somaaliyaan barbaadamaa turanii hagayya bara 2019 ka to’annoo jela oolfamanii turan yoo ta’an, Amajjii dhuma kana mana hidhaa Somaaliyaa Moqadiishoo jiru keessaa miliqanii amma bakki jiran hin beekamu.
Somaaliyaan yoo hedduu biyyi ollaashee Keeniyaan namticha kana dhoksaa jirti jechuun ka himataa jirtu yoo tahu; Jaarmayaan mirga dhala namaaf mormu Amneestii Internaashinaalis; Mr. Janaan dhuma amajjii keessa gara Keeniyaa seenuu odeeffannoo qabaachuu himee mootummaan Keeniyaa nama yakka ajjeechaan barbaadamaa jiru kana Somaaliyaaf akka dabarsu gaafatee jira.
Keeniyaan garu an namicha kana bakkanni jiru quba hin qabu jechaan haalteetti.
Ayyaanni Injifannoo Adwaa Ciminnii fi Murannoon Kan Itti Mul’atee Dha: Prezidaant Saahilewerq Zewdee